Iimveliso zeMali | Ezezimali (Ekhasi 2)
Wazi ntoni ngepenshini yomhlolokazi? Ukuba sisihloko ongenalo uluvo oluninzi ngaso, apha sikwazisa ngayo yonke into ekufuneka uyazi.
Ngaba ufuna ukubambisa ngento enye okanye yesibini?
Ukufaka isicelo semali mboleko yenye yezona zigqibo zinzima kwabanye abantu, hayi kuba lutyalo mali olukhulu ...
Zeziphi iintlobo zeinshurensi yemoto ekhoyo?
Ngaba uyayifuna i-inshurensi yemoto yenkampani? Yazi iindidi ezikhoyo zokwenza esona sigqibo siqinisekileyo kwizithuthi zakho.
Ngaba ucinga ngokutyala imali kwimarike yase China? Apha sichaza ukuba yintoni isalathiso sayo kunye neeyure zokutshintshiselana zaseAsia.
Yintoni imali yotyalo mali
Ukunyusa ukonga kwethu, kuya kuba luncedo ukwazi ukuba zeziphi iimali ezihlangeneyo. Apha siyichaza kwaye sithethe ngokusebenza kwayo.
Yintoni isicwangciso sepenshini
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba sithini isicwangciso sepenshini? Fumana yonke into oyifunayo malunga naye ukuba ufuna ukumqeshela ikamva lakho.
Ngaba uyazi ukuba yintoni i-inshurensi yetyala? Ngaba uyazi ukuba isetyenziswa phi? Fumanisa umxholo kunye nazo zonke iinkcukacha ekufuneka uyazi.
Umahluko phakathi kweVisa neMastercard
Ngaba i-MasterCard okanye iVisa ingcono? Ukuthathela ingqalelo ukuba lixesha lakho lokuqala koku kubini kokukhetha ukwenza ikhadi, yeyiphi oyikhethileyo?
Ukutyala kwigolide ngokunxulumene nokunyuka kwamaxabiso kunye nonikezelo lwemali
Ukuchonga ukuba kuyinzuzo na ukutyala igolide yinto esinokuyifumana ukuba siyazazi izizathu zojikelo lwayo. Ukunyuka kwamaxabiso, isiseko semali kunye noqoqosho.
IMinnows vs Shark: Ityala leGamestop kunye neReddit
Ngomhla kaJanuwari 27, 2021 uza kungena embalini njengenye yeentsuku ezinqabileyo kwimarike yemasheya, ...
Izinketho zezeMali, umnxeba kunye nokubeka
Ingcaciso malunga nokhetho lwezeMali, zisebenza njani iiFowuni kunye nePuts, kunye nomngcipheko kunye nezibonelelo ezibandakanyeka kutyalo-mali kunye nabo
Yintoni i swap kwi forex?
Ingcaciso yayo yonke into enxulumene nokutshintsha kwe-forex. Yintoni, ivela phi, ibalwa njani, kwaye ungazuza njani kuyo
Ukukhetha ingxowa mali yotyalo mali kwi2021
Ingxowa-mali yotyalo-mali sisixhobo sokufumana ingeniso kolu londolozo unalo kwaye akuyomfuneko ukuba ulusebenzise. Fumanisa Okuninzi.
Ingcaciso yemigibe yengqondo xa sityala imali. Ukuqonda isayikholojali yotyalo-mali kuyasinceda ukuthintela iimpazamo kunye nokuphucula izigqibo
Dibanisa amatyala kwakhona
Ingcaciso yento emalunga nokudibanisa amatyala, ukuba ungayenza njani, yintoni efanelekileyo ngakumbi, kunye nezinto ezingalunganga ezinokuthi zibandakanye.
Imali ebolekisiweyo eguqukayo okanye eguqukayo?
Khetha phakathi kobambiso olungatshintshiyo okanye olwahlukileyo, izibonelelo, izinto ezingalunganga, kunye nendlela yokwazi ukuba yeyiphi eyona ilungileyo ngokweprofayili yomthengi.
Imali mboleko yomntu
Fumanisa umxholo wemali mboleko yakho, umahluko kwikhredithi, iimpawu kunye namaxwebhu okucela.
Utyala phi kwimarike yemasheya
Inqaku liyilelwe ukwazi ukuba zeziphi iimveliso eziza kutyalomali, yintoni ekufuneka ithathelwe ingqalelo, kunye neeprofayili ezahlukeneyo zotyalo-mali
Ubambiso lwemali ephantsi
Funda malunga nembali yobambiso lwangaphambi kwexesha kunye nendlela uqoqosho lwaseMelika (kunye nehlabathi) oluphantse lwawa ngayo.
Ingcaciso yento ekuyiyo isalathiso seBuffet, ifumaneka phi, ibalwa njani, kwaye itolikwa njani njengomxeli wempahla
Umahluko phakathi kwekhadi letyala kunye nekhadi ledebhithi
Ikhadi letyala okanye ikhadi lebhanki. Fumanisa ukuba yeyiphi iyantlukwano kubo bobabini ukukhetha eyona ikulungeleyo ngokwetyala lakho.
Ukuba ufuna ukwazi ukuba yintoni i-akhawunti yokonga, yahluke njani kwabanye, iimpawu zayo, indlela yokuvula enye nangaphezulu, fumanisa.
Ukhuseleko oluthe kratya
Kukho ukhuseleko olugqithisileyo apho unokulungisa khona izikhundla ukuze ubuye kamva ngamaxabiso aqine.
Ukutyala imali kwimarike yaseJapan: iNikkei
I-Nikkei sisalathiso esifanelekileyo sezabelo zaseJapan, njengenye yeendlela ezizezinye kutyalo-mali kwiimarike zesitokhwe zaseYurophu. I-Nikkei I-Nikkei sesona sithuba sichaphazelekayo kwii-equity zaseJapan, njengenye yeendlela ezizezinye kutyalo-mali kwiimarike zesitokhwe zaseYurophu
I-Santander isungula isibonelelo esitsha semali mboleko kubathengi bayo
Abathengi beSantander baya kuba nakho ukufumana isibonelelo kwifom yebhonasi ukuya kuthi ga kumanqaku asisiseko ayi-100 kumdla wento ngokuxhomekeke kwiimveliso.
Izitokhwe ezi-5 ezinamandla amakhulu okuxabisa
Amandla okuhlaziya ngumahluko phakathi kwexabiso ekujoliswe kulo kunye nexabiso langoku lempahla yexabiso, kwi ...
URussell 2000: into engaziwayo kwimarike yemasheya yase-USA
Yintoni uRussell 2000? Yonke into ofuna ukuyazi malunga nesalathiso sesitokhwe esenziwe ziinkampani ezincinci ezingama-2.000 ezenziwa ikakhulu kwi-USA.
Iindawo ezi-6 ezishushu zemarike yemasheya ngeeholide
Ukubuya kweeholide kuzakuzisa uthotho lwamafu amnyama kubatyali mali abazakufumana amaxabiso asezantsi esitokisini.
Ithuba lokungena kwiimarike zaseAsia
Izitokhwe zase-US ziye zadibana ngamandla emva kokuba kuthengisiwe okwenziwe yintsholongwane ngo-Matshi, ethi…
Kutheni iRepols ingayeki ukuya ezantsi?
Ukuba i-Repsol ibonakaliswa yinto ethile, kungenxa yokuba yenye yeenkampani ezibonelela ngeyona nto inokubakho yokuhlaziywa, ngamanqanaba aphakathi kwe-5% kunye ne-15%,
Izizathu ezininzi zokutyala imali kwisilivere
Ngaba isilivere lutyalo-mali olulungileyo? Kutheni kufuneka umntu ayithenge? Kungokwemvelo kwaye kububulumko ukuba umtyali mali ...
Ngaba lixesha lokuTshintshiselana ngeZinto eIndiya?
Baninzi abatyali mali abakwizinga eliphezulu ababetha i-Nifty generating returns ku-35% ukuya ku-60 ...
UWarren Buffet uyityala phi imali yakhe?
UWarren Buffett uhlala engomnye wabantu abazizityebi emhlabeni, enexabiso elifanelekileyo le-80,8 yezigidigidi ...
Ungabenza njani ubutyebi ngokutyala imali?
Izabelo zithengiswa kwiimarike zesitokhwe ezichongiweyo (ukutshintshiselana ngesitokhwe) njengeNational Stock Exchange (NSE) kunye neStock Exchange ...
Ukutyala imali kwi-VIX
I-VIX yikhowudi yento ebizwa ngokusemthethweni ukuba yiChicago kwiBhodi yeeNketho kwiMarike yokuTshintshiselana kweNtengiso (ngesiSpanish: iinketho zentengiso ezinokubakho kwimo ...
I-FTSE 100 sisalathiso esenziwe ziinkampani ezinkulu ze-100 (ngentengo yemalike) ebhalwe ku ...
Njani ukubuyela kwimeko yezoqoqosho?
Kukho intelekelelo engapheliyo malunga nohlobo lokuphinda uqoqosho lwase-US lube nalo. Ngaba iya kuba kukuchacha ngokukhawuleza kwimilo ...
Ithuba lokutyala imali kwi-DAX yaseJamani?
I-DAX, i-DAX 30 okanye i-DAX Xetra sisalathiso se-blue chip stock yeenkampani ezingama-30 ezinkulu ...
Yintoni ixabiso lotyalo-mali?
Kwindawo yokuthengisa izindlu nomhlaba, kukho iindidi ezininzi ze "xabiso" elinikezelwe kwipropathi yokwenyani, zonke zisebenza ku…
Inditex kwixesha elibalulekileyo lokutyala
I-inditex yokuthengisa kwikota yokuqala yonyaka-mali 2020-phakathi koFebruwari 1 ukuya ku-30…
Ixesha elizayo kwimpahla yorhwebo
Ngaba ukutyala imali kwikamva lezorhwebo kunokwenzeka ngoku? Ewe, kufanele ukuba kukhunjulwe kwasekuqaleni ukuba ...
Tyala imali kwimeko yokungazinzi
Ukuba iimarike zezabelo zibonakaliswa yinto ngeli xesha, njengesiphumo ...
Utyala phi kwikota yesithathu?
Akukho mathandabuzo ukuba ukuwa okungathethekiyo okwenzekileyo kwiimarike ngenxa yempembelelo yecoronavirus ine ...
I-United States Federal Reserve iqinisekisa inzala kwi-0% ukuya ku-2022
I-United States Federal Reserve (Fed) ithathe isigqibo sokugcina amaxabiso akhoyo kwimbali esezantsi ye-0% de ...
Izinto zokwenza imveliso: enye indlela yokutyala imali kwimarike yemasheya?
Ngamaxesha okungazinzi kwiimarike zezemali, zininzi iindlela abanokukhetha kuzo abatyali mali ukwenza inzuzo ...
Idatha engummangaliso yengqesho eUnited States
Kuyamangalisa ukuba idatha yengqesho yenziwe eUnited States ekungekho mntu wayelindele, nkqu ...
I-Dow Jones idlula inkxaso yexesha elifutshane
I-Dow Jones ibonakaliswe kwiiseshoni zokurhweba zakutshanje ngokwaphula inqanaba lamaxabiso ngaphezulu ...
Ukutyala imali kwizitokhwe zaseNikkei
INikkei 225, ebizwa ngokuba sisalathiso seNikkei, sesona salathiso sithandwa kakhulu kwimarike yaseJapan, yenziwe ngama-225 ...
Ngaba uyafuna ukwazi okungakumbi malunga noMgangatho kunye namahlwempu?
Umgangatho kunye namahlwempu yenye yeempawu ezibonisa amandla amakhulu ngalo mzuzu nangaphezulu ...
Imarike yemasheya ejonge kwimpikiswano phakathi kweMelika kunye ne China
Enye yezinto ezinokuthi zichaphazele ukuvela kweemarike zamashishini zamazwe ngamazwe ...
I-oyile ingena kwizikhundla zabatyali mali
Enye yeeasethi eziyimali eziye zavuselelwa kwiphothifoliyo yotyalo-mali ukusukela ngoMatshi ...
Ibex 35 ibonisa ubuthathaka obukhulu kunezinye izikwere
U-Chancellor wase-Germany u-Angela Merkel kunye no-Mongameli wase-France u-Emmanuel Macron baveze 'isiCwangciso sokuBuyisa' kwi-Union ...
Ukuqhekeka kwegolide kunye nesilivere ngaphezulu
Igolide kunye nesilivere zizinto ezimbini ze-asethi ezinemali ezigcina amandla amakhulu anyukayo ...
I-OHL iphinda ibonakale ngamandla kwimarike yemasheya
Ngokuchasene nengqikelelo i-OHL iphinde yasebenza kwimarike yemasheya yelizwe lethu kwaye okomzuzwana kulindeleke ngenxalenye ...
Iibhanki icandelo eliza kulithintela kwi2020
Icandelo lebhanki licandelo ngokugqwesa kwamashishini kuba ubukho bawo butsalela ...
Imarike yemasheya iseyeyona ndlela ilungileyo yotyalo mali
Ngaphandle kwayo yonke into, ukutyala imali kwimarike yemasheya yeyona ndlela ilungileyo yokwenza ukonga kunenzuzo, ngakumbi ukuba uya ...
Igcinwa njani imali engenayo esisigxina?
Ngaphakathi kwizicwangciso zotyalo mali lwe bond, kufanele kuqatshelwe ukuba indlela otyala ngayo imali kwiibhondi kwi ...
I-Endesa kunye neRepsol baphucula iziphumo zabo ngexesha le-coronavirus
Kubekho iinkampani ezimbini ezigqithe kulindelo kwiziphumo zeshishini kwikota yokuqala yonyaka e ...
UDuro Felguera: impendulo ye-chicharro
Elinye lamaxabiso elimangalise kakhulu kwiintsuku zamva nje nguDuro Felguera ukusukela ngelixa irente ...
Iiresiphi zokuvula izikhundla kwimarike yemasheya
Esinye seziphumo ekufuneka sibe nazo ngenxa yengozi eyenzekileyo kwiimarike zamasheya kwihlabathi liphela ...
Leliphi ikhadi elilungele eyona ndlela uyisebenzisayo?
Ikhadi letyala okanye ledebhithi? Lowo ngumbuzo esihlala sizibuza wona xa ukhetha ...
Ngaba iidipozithi zexesha elide zikufanele?
Kwiidipozithi zexesha elide, akukho zonyuselo zijolise kakhulu kubasebenzisi, nangona ngokuchaseneyo, amaqondo wenzala asezantsi awaphakamanga kakhulu.
Ibex 35 iyakufikelela nini kwinqanaba lama-8000?
I-European Central Bank (ECB) iphinde yabonisa ukuba izimisele ukunceda uqoqosho ...
Ukuziphatha kweeasethi zemali ezahlukeneyo ngexesha lobunzima
Amaxabiso ee-indices zehlabathi ngo-Matshi azise isimilo esichaseneyo kwii-fortnights ezimbini ezifanayo. Ngelixa…
Ngawaphi awona macandelo anyusa kakhulu?
Ihlabathi, iYurophu kwaye, ewe, ukwehla kwemali eSpain kungena ngokupheleleyo kwipanorama yeenkampani ezidweliswe ...
Uzigcina njani iindleko zotyalo-mali?
Ixesha lifikile lokugcina iindleko zotyalo-mali kwaye le nyani inokuvela kumacandelo ahlukeneyo ...
Izitshixo zokwenza isivumelwano semali mboleko
Ukuthenga ikhaya yinto ebalulekileyo ebomini bakho kangangokuba awuyi kuba nakho ukushiya naliphi na ithuba lokuhlaziya. Ukuba ayisiyiyo yonke into Ukuqesha ubambiso lwekhaya yinto ebalulekileyo ebomini bakho kangangokuba awuyi kuba nakho ukushiya nasiphi na isithuba ezandleni zokuphuculwa
Ukuphinda ubuye okanye utshintshe imeko kwiimarike zesitokhwe?
Itekhnoloji iyaqhubeka ngokungathandabuzekiyo licandelo eliqhubeka nokubonisa owona mandla mkhulu. Ukuya kwinqanaba lokuba ...
Iibhanki: I-OPAS, amarhe kunye neziphumo ezibi
Imarike yemasheya iyaqhubeka sisixhobo esibi kukhuseleko lwecandelo lebhanki emva kokwandiswa kwecoronavirus kwaye sele ...
Ixabiso elikhuselekileyo: igolide kwiminyaka yayo esixhenxe yokuphakama
Ukuba kukho iasethi yezemali egcina imeko ecacileyo yokunyuka ngexesha lolwandiso lwe-coronavirus, ayikho enye ngaphandle ...
Zeziphi ezona marike zilinganayo zokutyala imali?
ISpanish, iYurophu okanye iUnited States zilingana. Le yingxaki kwakhona uninzi ...
Uyenza njani isicwangciso sepension?
Malunga nexesha elide
ICoronavirus ishukumisa imarike yorhwebo
I-Coronavirus ikwabonisa iziphumo zayo kwimarike yezinto ezingafunekiyo, ibangela ukunyuka nokuwa kuxhomekeke kwicandelo abakulo.
Izibophelelo zaseSpain ezisengozini
Uzinzo kwiibhondi ezizimeleyo zaseSpain yinto eqhelekileyo egcinwe kule minyaka idlulileyo
Utshintsho kwimikhwa yotyalo-mali: lixesha lobuchwepheshe?
Imikhwa yethu yemihla ngemihla kunye nobudlelwane okanye isimilo kutyalo-mali sitshintshiwe ngamanyathelo okuvalelwa ...
Iimali zotyalo-mali kwimarike yemasheya: izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga
Elinye lamagalelo eemali kwimarike yemasheya kukuba awunakukhathazeka malunga nokubeka esweni kwabo ngexesha elifanelekileyo kuba ayisiyiyo intelekelelo.
Isivumelwano phakathi kweRussia ne-Saudi Arabia sokwandisa imveliso yeoyile
Ayizizo zonke eziza kuba ziindaba ezimbi zeasethi yezemali ngexesha lesiphithiphithi esasazekileyo. Kwaye kulungile ...
Yimalini enqwenelekayo ukutyala imali kwimarike yemasheya?
Ukufika kwe-coronavirus kubangele ukuhla kumaxabiso ezabelo ezithengiswa kwiimarike ze ...
I-ACS ibhuqa ukusuka kwi-22%
I-ACS ibuyile ukusuka kumzantsi wayo phakathi ku-Matshi ngaphezulu kwe-20%. Ukuba…
Iingcebiso zokwehlisa ixabiso lakho lobambiso
Ubambiso luyimveliso ebalulekileyo kubomi babantu kangangokuba ayinakushiywa kuphuculo. Hayi ngelize, imali eninzi Isingxobo seendleko sinokuvela kumacandelo ahlukeneyo kwaye kungakhokelela kwixabiso eliphantsi lobambiso kumanqanaba angama-20% kuhlahlo-lwabiwo mali lwakho lokuqala
IiAkhawunti zokuphucula ukusebenza ngokulingana
Iiakhawunti ezihlawula kakhulu yenye yezona ndlela zinenzuzo yokufumana ukubuyisa okwanelisayo.
Ukuhlawulwa kwefowuni okuvela kwiibhanki
Ezinye zezicelo ezininzi ezinokusetyenziselwa ukuhlawula iifowuni sele zifumaneka kumaziko emboleko.
IAG kunye nexabiso lezokhenketho: ukubakho okanye ukungabikho kwimarike yemasheya
Ukuba kukho icandelo eliza kuchaphazeleka kwingxaki yezoqoqosho ebangelwe kukwandiswa kwecoronavirus ukuba akukho ...
Iimarike zilindele amanyathelo amatsha ezoqoqosho kwi-EU
I-Eurogroup isebenza kwiphakheji yamanyathelo ezoqoqosho ukujongana nengxaki ye-coronavirus ebandakanya ukusebenzisa ...
Amaxabiso ama-5 aqinisekisa intlawulo yesahlulo
Sikwixesha apho abatyali mali bejonga ukuba bazokulanda izabelo zabo ngenxa yengxangxasi ...
Ngaba lixesha lokuthengisa iimali zethu zotyalo-mali?
Kwimeko yokungaqiniseki okuphezulu, kunye nokungazinzi okukhulu kwiimarike, imali yotyalo-mali inamava ...
Ungakuphepha njani ukubekwa kwangaphambili? Iingcebiso zokuphepha le meko
Ukuxelwa kwangaphambili yinkqubo yesigqeba esilawula ukuthengiswa kwepropathi enendawo ekubanjiswe ngayo ngenxa yokungabikho komntu otyalwayo.
Icandelo elibi kakhulu lobuchwephesha kwicandelo lokugcina imali
Sikwimeko yentengiso ngokungagungqiyo kwaye elinye lamathandabuzo avela ngalo mzuzu kukuba ...
Izicwangciso ezichazwe kakuhle emva kwengozi yentengiso yesitokhwe
Ngelixa abanye abahlalutyi beemarike zezabelo babhekisa kumaxabiso esitokhwe elungelelanisiweyo,…
Ingozi iyonke kwiimarike zamasheya kwihlabathi liphela
Intshukumo enjalo ayikaze iphuhliswe kwiimarike zokulingana kwihlabathi liphela. I…
Utshintsho lwamaxabiso kwezinye iziqinisekiso ze-Ibex 35
Esinye seziphumo ngokuvela kwe-coronavirus kukuba amaxabiso amatsha aveliswa kumaxabiso ...
Amaxabiso ama-5 apho ungafanelekanga ukuba khona
Ukuphindaphinda kwamashishini eSpain kwakujikeleze iipesenti ezili-19 kwiiseshoni ezintlanu zokurhweba. Kodwa…
Iikhredithi zotyalo mali: ngaba zixabisa zona?
Iya isanda into yokuba abatyali mali abancinci bacele ukubolekwa imali ukuze benze utyalomali kwimarike yemasheya.
Yakha iphothifoliyo yotyalo-mali ngokufunda kwiimpazamo
Isifundo sokuba abatyali mali basifunde ekuweni kweemarike zokulingana njengesiphumo ...
Ezinye izabelo zincitshisiwe kwaye ezinye zinqunyanyisiwe
Olunye loloyiko olukhulu kwicala labatyali mali kukuba izahlulo zeenkampani ziya kuncitshiswa okanye ...
Yintoni ukubuyisela ku-V, U okanye uL?
Akukho mathandabuzo ukuba impendulo yeemarike zokulingana kwihlabathi liphela ziya kuxhomekeka ...
I-SOS: ukuxilongwa kweemarike zokulingana
Ambalwa kakhulu amaxabiso entengiso yee-equity azisindisayo kulo mjelo uqinisekileyo ...
Amaxabiso ama-5 achaphazeleka kakhulu kwi-coronavirus
Zeziphi ezona stock zizikhuselayo kwimarike yemasheya?
Elinye lamaqhinga okujongana namaxesha anzima kwimarike yemasheya kusekwe ekwenzeni iphothifoliyo yotyalo-mali enamaxabiso okuzikhusela okanye okulondolozayo.
Intlawulo ngekheshi okanye ngekhadi
Ukuhlawulwa kwamakhadi yinto esele ihleli kwaye sele kukho amazwe apho ukunyamalala kwemali kuyinyani.
Izitokhwe ezi-7 ezenze ngcono kwintengiso yemasheya
Ngeli xesha i-artillery enzima ye-Federal Reserve (Fed) kunye ne-European Central Bank (ECB) khange ikwazi ...
Ngaba umgangatho we-Ibex 35 unokuthenjwa ngamanqaku ayi-6.100?
Kubonakala ngathi inqanaba lamanqaku ayi-6.100 linokusebenza njengomhlaba kwisalathiso somvuzo ...
Uyenza njani imisebenzi yokuthengisa kwintengiso yesitokhwe?
Imisebenzi ethi ekugqibeleni ichonge impumelelo okanye hayi kutyalo-mali kwimarike yemasheya yenziwe ngokwe ...
Ukuwa kwemarike yemasheya: Izakuphendula njani iisitokhwe ukusukela ngoku?
Kukungqubana okugcweleyo kwintengiso yesitokhwe. Le yindlela abahlalutyi bezemali abachaza ngayo imeko yangoku ye ...
Akukho migangatho kwiingxowa zomntu wonke
Iibhanki eziphambili zaseKhanada, eJapan. INgilane, iSwitzerland, iUnited States Federal Reserve kunye ne-European Central Bank ibhengeze ...
Ngaba imilinganiselo ye-coronavirus alarm ibachaphazela njani abasebenzisi bebhanki?
Imeko yokothuka abemi abadlula kuyo iyachaphazeleka kubudlelwane babo nehlabathi ...
Uyonga njani imali xa uthengisa kwintengiso yemasheya?
Enye yeenjongo zakhe nawuphi na umtyali mali kwimarike yemasheya ayisiyokwenza ingeniso yabo kuphela. Kodwa yandisa imisebenzi yakho ...
Kwenzeka nini ukuba kuqhume kwaye ungathengisa njani?
I-bounce sisixhobo esifumanekayo kubatyali mali sokunciphisa ilahleko kwaye ngaphandle kokuthathela ingqalelo ii-odolo zokuyeka ilahleko.
Ukuthengiswa kwangaphambili kunqunyanyisiwe: yintoni enokwenziwa ngabatyali mali xa bejamelene noloyiko?
Ukuba abatyali zimali abakazilahli izikhundla zabo ukuza kuthi ga ngoku, abanakukhetha kodwa kukunyamezela imvula….
Abaphumeleleyo kunye nabaphulukene nokwehla kwezinga e-US.
Ukunqunyulwa kwenqanaba lama-50 lamanqaku esiseko kuye kwathetha intshukumo entsha kwiimarike ze ...
Ngaphandle kwayo yonke into, izinto ezi-5 ezintle ezithi i-coronavirus isishiye kutyalo-mali
Kuyinyani ukuba uvalo lubambe intshukumo yabatyali zimali abancinci nabaphakathi kwaye ...
Yenza umngcipheko wokulahleka
I-Acciona yenye yezona zinto zixabisekileyo kwizabelo zeSpain kwaye kulo nyaka ibiphinde yahlaziywa nge-13%.
Izitokhwe ezi-7 eziphucule isivuno sesahlulo
Isivuno sesahlulo siphucuka ngokuhla kwintengiso yesitokhwe emva kokuba i-Ibex 35 ihleli ...
Utyalomali olutsha lwedijithali: iLibra
I-Facebook yezobuchwephesha, umnini wenethiwekhi yoluntu kwelo gama linye, ugxininisile ukuba ingaphehlelela imali yayo entsha yedijithali, iLibra, kwiintsuku ezizayo.
Zithini izabelo? -Ungangenelwa njani kubo?
Ingcaciso yokuba zeziphi izabelo, zivela phi, kwaye zibalwa njani izibonelelo ezifunyenwe kubo, kuxhomekeke kwixabiso lenkampani.
Imiqobo emikhulu yeengxowa ukubuyela kwiindawo eziphakamileyo
Akukho mntu uthandabuzayo ukuba ukuwa kwintengiso yemasheya ngeentsuku zokugqibela zikaFebruwari kuye kwabakho ngesihluku. Kude kube ...
Ercros ithuba lokufumana kwakhona
I-Ercros yenye yezokhuseleko ezincinci kunye naphakathi kweemali ezinkulu ezinomthamo omkhulu weekhontrakthi ngenxa yokuba ...
I-coronavirus ifaka ukungazinzi kwimarike yemasheya: kufuneka wenze ntoni?
Ukunyaniseka ngumqondo wokuba abatyali mali baya kuhlala nabo, ubuncinci kwisiqingatha sokuqala se ...
Indawo yokurhweba: apho unokuvula khona izikhundla
Asinakulibala ukuba imisebenzi yorhwebo ayilulanga kakhulu kwaye ifuna ubuchwephesha obubalulekileyo kuphuhliso lwabo.
Kuza kufika nini ukubetha okukhulu kwimarike yemasheya?
Kubonakala ngathi ngumcimbi wexesha, kodwa utshintsho luya kuza kwakamsinyane kunokuba kamva. Ngenxa yokuba akukho nto ivuka ngonaphakade, ...
Iimpahla zeebhanki zehagu kwiimarike zemali
Amaxabiso okanye iiasethi zemali zibizwa ngokuba ziibhanki zehagu ezo ndlela zotyalo mali zenza imbuyekezo encinci minyaka le, ...
Athini amaxabiso aya kuthi axhamle ekuveleni kwemoto yombane
Ubhaliso lweemoto zombane eSpain luvale i-2019 zizonke iiyunithi ezingama-24.261, kubandakanya iimoto ezihamba abakhweli, ezorhwebo kunye ...
Isivuno sokwahlula siphucuka ngokuhla kwemarike yemasheya
Izabelo ezivela kwii-equities zaseSpain zezona ziphezulu kwimigangatho yokurhweba kumazwe aphesheya kwaye zezona zibonelela ...
Uyifumana njani i-inshurensi yasimahla?
I-inshurensi yimveliso ethi kwiimeko ezininzi kubalulekile ukuba uzikhusele kwiimeko ezingafunekiyo.
Kuthekani ukuba uqhushululu luvela kwiimarike zesitokhwe zehlabathi?
NgoMvulo omnyama kwiimarike zokulingana kwihlabathi liphela njengesiphumo sokwanda kwecoronavirus. Konke…
Iimpawu eziphambili zorhwebo kwimarike yemasheya
Unamaqhinga ahlukeneyo emarike yemasheya kunye nezalathi ezinokukunika izisombululo ezininzi kwiimfuno zakho kwicandelo lotyalo-mali.
Yeyiphi ingxowa mali yotyalo-mali endifanele ukuyikhetha?
Iimali zotyalo mali yenye yeemveliso ezikhethwe ngabasebenzisi ukuhambisa imali abayigcinileyo ...
Iirhafu ezinxulunyaniswe nezinto zokwenza imveliso
Alithandabuzeki elokuba olu didi lweedipozithi zebhanki zexesha elimiselweyo yenye yeefomathi zentsusa ezikhoyo ngoku.
Amaxabiso ama-6 anokuyenza ngcono kunenye
?? Enye yeenjongo zakhe nawuphi na umtyali mali kukuvula izikhundla kukhuseleko olunokwenza ngcono kunabanye.
Iimveliso ze-ETFs - Into ekufuneka uyazi
Iinkcukacha zokwazi xa utyala imali kwii-ETF zorhwebo. Ingcaciso phakathi kobudlelwane besikowuteshini kunye nezalathiso zebenchmark
U-Endesa no-Iberdrola bophula amaxabiso abo
Kubonakala ngathi bobabini u-Endesa kunye no-Iberdrola bafikelele kwelona nqanaba liphezulu lejelo labo lenkomo. Kodwa kuyabonakala ...
Uyivula njani iakhawunti yokutshekisha phesheya? Inyathelo nenyathelo
Ukuvula iakhawunti phesheya kunokubonelela ngezibonelelo ezithile kwiimveliso ezinesivumelwano, kunye nemida ethile yokulamla ephezulu.
I-Ferrovial, lelinye lamaxabiso asezantsi kakhulu kwi-Ibex 35
Esinye sezicwangciso zotyalo-mali ngeli xesha kubandakanya ukugcina iFerrovial kwizibambiso zesecurity kwisiqingatha sokuqala sesinye sezicwangciso zotyalo mali ngeli xesha kubandakanya ukubamba iFerrovial kwipotifoliyo yezokhuseleko kwixesha elizayo.
Amanqanaba apho unokuthenga khona
Ukuthengwa kwintengiso yesitokhwe lelinye lawona maxesha abalulekileyo abatyali mali abanawo ukusukela ...
Izitokhwe ezi-8 ezaphukileyo inkxaso okanye ukuxhathisa
Inkxaso yinqanaba lexabiso elingaphantsi kwelo langoku, kwaye elo libonakaliswa ngokuthelekiswa namanye amanani aneempawu ezifanayo ...
Ayakuba yintoni amaxabiso okusabela kwi-2020?
Imfazwe yorhwebo phakathi kwe China ne-United States, uxinzelelo kwi-Middle East kunye nomngcipheko wokhetho e-United States ...
Utyalomali kwiinkampani ezikwi-Intanethi
I-Intanethi yaseYurophu sisalathiso esiqokelela ikowuteshini yeenkampani eziphambili kweli candelo lobugcisa kwilizwekazi elidala.
Ngaba ukuhla kwezinto ezingafunekiyo kuyichaphazela njani intengiso yemasheya?
Ixabiso leoyile yaseBrent lisebenze kwiidola ezingama-54,78 ngomgqomo, lilahlekelwa yi-1,62% xa kuthelekiswa ne ...
Ngaba lixesha lokuba sibuyele kwiimarike ezisakhulayo?
Olunye lweempawu zoko kubizwa ngokuba kukutshintshiselana ngesitokhwe kukuba banokuvumela inzuzo enkulu ekuthengeni nasekuthengiseni imisebenzi.
Amacandelo kwimarike yaseSpain echaphazelekayo ngurhulumente omtsha
Sele kukho urhulumente omtsha eSpain kwaye kukho amacandelo amaninzi adweliswe kwiimarike zezabelo eziza kwenzakala kwaye zixhamle.
Ixabiso eli-8 elinengozi enkulu ngo-2020
Ukukhusela ekusebenzeni kwiimarike zentengiso yesitokhwe akukho nto ingcono kunokuvezwa kwamaxabiso anokuwenza ngcono.
Onke amaxabiso ecandelo lezokhenketho alungisa amaxabiso awo kwimarike yemasheya
Imeko yentengiso yemasheya ebangelwe yi-coronavirus inexhoba elicacileyo kwiimarike zamashishini ezingenanzala emanyeneyo….
Izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga ezivela kwizorhwebo
Kufuneka iqatshelwe into yokuba iimveliso ezivela kwimveliso zezemali zibonakaliswa ngaphezulu kwako konke ngokugabadela kwazo.
Kutheni le nto i-Ibex 35 isalele ngasemva kwimarike yaseYurophu?
Enye yeedatha ebonisa ukuvela kweyona indices ye-equity yaseYurophu kukuba ...
Vuka kwimarike yaseSpain okanye ukunyuka kobuxoki
I-Ibex 35 ivaliwe kwiveki ephelileyo ngokunyuka kwe-0,50%, okukhokelele kumaxabiso ayo abe kumanqanaba sele ekufutshane kakhulu namanqaku angama-9.200.
I-Aena isondele kakhulu kwi-euro ezingama-200
Kubonakala ngathi akunakwenzeka kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, kodwa inyani kukuba u-Aena sele ekwimeko yokuhlasela umqobo we-euro ezingama-200 ngesabelo ngasinye.
Ngaba ezona stock zininzi zithengwa kwimarike yemasheya?
Ukuthenga ezona zibambiso zisala kwimarike yemasheya sisicwangciso esijolise ekuzuzeni kolo khuseleko olwenzile kakubi.
Iinkampani ezizimeleyo nezizinzileyo zezahlulelo zoBuntu
Inkcazo yokuba ziinkampani zokwahlula ubuNtu. Imbuyekezo efunyenweyo, indlela yokutyala imali kuyo kunye nendlela yokuzifumana.
6 amathuba okuthenga kulo nyaka
Ingxaki ekuphela kwayo oya kuba nayo kukufumanisa oku kuthengwa kunye namathuba oshishino kwaye ungawasebenzisela ukwenza imali inzuzo.
Amaxabiso athathwe kakhulu kwimarike yemasheya yintsholongwane yaseTshayina
Intsholongwane yaseTshayina ibetha abatyali zimali kule veki ngokuchaphazela kakubi ukuthengisa ...
Ukuthengiswa kwe-FED kunye ne-ECB kuvula indlela yethemba kwiimarike zesitokhwe
Into ebibonakala ngathi ayinakucingwa kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo iyinyani: ukuthengiswa kweFed kunye ne-ECB kuvule indlela yokuqhubela phambili ukonyuka.
Ngaba iNetflix inexabiso elifanelekileyo njengoko abahlalutyi besixelela?
Ngaphandle kwamathandabuzo, iNetflix edwelisiweyo ibisesinye sezokhuseleko esinike owona mdlalo mkhulu ...
Ezinye izimvo zokutyala imali kwi-2020
Alithandabuzeki elokuba elinye lamacandelo atyale imali kwi-2020 libhanki ngenxa yokunyuka kwayo kwezi nyanga zidlulileyo.
Utyalomali kwizinto ezingalunganga
Iinkampani ezijolise kwezi zinto zivelisiweyo zihlelwa phantsi kweenqobo ezimbini ekufuneka zithathelwe ingqalelo ngexesha lokuqeshwa.Iinkampani ezijolise kwezi zinto zingahluziweyo zihlelwa phantsi kweendlela ezimbini ekufuneka zithathelwe ingqalelo ngexesha lokuqeshwa.ezi mveliso zezezimali
Ukwahlula-hlula kwahlulwa-Ngaba yinto ekhethiweyo?
Ukuphinda kutyalwe izabelo kucetyiswa njengendlela eqinisekileyo yokunyusa okubonakalayo kwinkunzi. Inkcazo malunga nokuba yintoni kunye nokuba ungayisebenzisa njani
Uyikhusela njani imali yabantu abazisebenzelayo?
Inxalenye elungileyo yeenkampani zeinshurensi zinika abantu abazisebenzelayo ithuba lokurhola umgaqo-nkqubo wokukhubazeka okwethutyana.
I-OHL iyaxabisa iipesenti ezingama-40 kwinyanga yokuqala yonyaka
Ukuba kukho ixabiso lokunyuka okwangoku kwii-equities zaseSpain ezingezizo ngaphandle kwe ...
Uluhambisa njani ukuthengisa ngetyala?
Ukuthengisa ngetyala yimodeli esekwe ngokusisiseko kwinto yokuba unokuxhamla ekunciphiseni kweemarike zesitokhwe kwihlabathi liphela.
Ngawaphi amagama okusisigxina oza kuwakhetha kwimarike yestokhwe ye2020?
Iqela libonakala lisafakwa kwiimarike ze-equity, ngakumbi e-United States ...
Yintoni iMoat, igama elithi Warren Buffett libhekisa kulo?
Ingcaciso yento Moat yezoqoqosho yenkampani, funda ukuyichonga, kunye nendlela yokuyisebenzisa kwilizwe lotyalo-mali
Ukuphumelela ukhuseleko kunye namaCandelo kunyaka ophelileyo
Akunakulityalwa ukuba kuye kwakho uthotho lweenqobo eziphume ziphumelele kunyaka ophelileyo, zaze zafikelela kuma-50%.
Ibex 35 ilinde ukugqitha amanqaku ayi-10.000 XNUMX
Ukuphindaphinda okwenzekileyo kwiiveki zamva nje kwisalathiso se-equity index, i-Ibex 35, kukhokelele ekubeni kuvavanye indawo yamanqaku angama-9600.
Yenza elinye lamaxabiso ashushu kulo nyaka
I-Ence lolunye lolona khuseleko lusebenzayo kwiinyanga ezidlulileyo kwaye uninzi lwabalimi abancinci nabaphakathi balindile.
Ukhuseleko lwe-6 olunezahlulo ezilungileyo
Kukho abatyali mali abasekele isicwangciso-qhinga sabo kutyalo-mali kwiinkampani ezinesivuno esikhulu se-9%.
Iindlela ezi-5 zokuphucula inzuzo kutyalo-mali kwimarike yemasheya
Ixabiso eliphantsi lemali, ngenxa yesigqibo se-European Central Bank (ECB) sokuthwala ...
Ii-asethi eziyimali ezi-4 zokuvula izikhundla kunye nesicwangciso sokusetyenziswa
Ukusukela ngoku ukuya phambili, ezinye iiasethi ezinomdla kakhulu zezemali zibonakala zivula izikhundla kwaye ziqwalasele iphothifoliyo yethu elandelayo yotyalo-mali.
Ungayidibanisa njani imali yotyalo mali kwii-equities?
Enye yeenzuzo zeemali zotyalo-mali ezisekwe kwiimarike zokulingana kukuba ...
Uyila njani ipotifoliyo esisigxina yomvuzo rhoqo
Ipotifoliyo esisigxina ikuvumela ukuba uthathe ithuba lonke lokuhlaziywa kweeasethi, ngelixa unciphisa umngcipheko. Ukusebenza kwayo? Ilula kwaye kulula
Uqoqosho lwaseSpain luyaphola kwaye luchaphazela imarike yemasheya
Idatha enkulu yamva nje evela kuqoqosho lwaseSpain ibonisa ukuba ukuphola kwayo kuyinyani kwaye kuchaphazela iimarike zesitokhwe.
I-Oscillators yorhwebo kwimarike yemasheya
Esinye sezixhobo abatyali mali abancinci nabaphakathi ekufuneka bewenzile kwimisebenzi yabo yenziwa ngezixhobo ze-oscillators.
Ukuhamba kwimarike yeoyile
Olunye ukhetho olunokubangela inzuzo olunokuthi lusetyenziswe ngabatyali mali kukususa imali yotyalo-mali esekwe kwioyile.
Izitokhwe ezahlukeneyo ezinokuthi zisebenze ngcono ngo-2020
Enye yeenjongo zabatyali mali kukubhalisela iziqinisekiso eziza kusebenza ngcono kunabanye.
I-Stock Screeners -Iinjini yokukhangela ukukhetha isitokhwe esinomdla
Inkcazo yento ekuthiwa zii-Stock Screeners nokuba zeziphi, izixhobo zokukhangela iinkampani. Ukukhethwa kwamaphepha alungiselela ezi zixhobo.
Ngaba ukungqubana phakathi kwe-US ne-Iran kuyichaphazela njani intengiso yemasheya?
Ukuqala konyaka omtsha kusizisele iindaba ezimbi kubatyali mali ezinje ngengxabano phakathi kwe-US ne-Iran kwaye oko kukhokelele kwintengiso ye-stock stock.
Izinto eziluncedo nezingalunganga kwiimali zemali
Iimali zemali zenziwa ngeefomathi ezineeasethi ezenziwe zizixhobo ezinengeniso yexesha elifutshane, ubuncinci iinyanga ezili-12.
Iimpawu zokuqala zobuthathaka e-Endesa, okanye kukukhohlisa?
Icandelo lezombane liza kuba lelinye elinokuthi litshintshe kakhulu kulo nyaka mtsha wentengiso, ingakumbi izabelo zeEndesa.
Kuya kufuneka ubenezikhundla ezivulekileyo kwigolide
Enye inketho onayo ngaphakathi kwegolide zii-ETFs, engumxube phakathi kweemali zotyalo-mali kunye nokuthengwa kunye nokuthengiswa kwezabelo kwimarike yemasheya.
Iimarike zesitokhwe eYurophu
Kukho ubomi obungaphaya kwesalathiso esikhethiweyo sentengiso yaseSpain, i-Ibex 35 ngolunye uthotho lwamaxabiso kwiimarike zesitokhwe zaseYurophu.
I-Telecos ibuyela kwi-radar yabatyali-mali
Bekulixesha elide okoko bekukho izitokhwe ezintathu ezivela kwicandelo lomnxeba kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35.
Ixabiso eli-7 elonyusa ukwahlula kwabo ngo-2020
Unokukhetha iinkampani ezidwelisiweyo ezibonelela ngesahlulo esingaphezulu kwe-7%, yenye yezona ziphezulu kwizabelo zelizwekazi lakudala.
Ngaba kufanelekile ukungena ematyaleni ukuze ubhalise imali mboleko?
Utshintsho kwimikhwa yokuqesha luyajongwa njengoko kukho umkhwa ekuqeshweni kweebambiso ezinxulumene nengeniso esisigxina.
Zinjani iidipozithi zexesha elide?
Iidipozithi zexesha elide, ngenxa yeempawu zazo ezizodwa, zenziwa njengemveliso yokonga kunotyalomali.
Ezi nkampani ziqala unyaka ngeendaba ezintsha
Akukho nto ingcono kunokuba neendaba ezintsha kwiinkampani ze-Ibex 35 zokuba neeparameter ezininzi zokwenza elinye iqhinga lotyalo-mali.
Iimpawu zokungena okanye ukuphuma kwintengiso yesitokhwe
Enye yeenjongo abatyali mali abaninzi abanazo kukufumana eyona miqondiso mihle ukuze bangene okanye baphume kwiimarike zezabelo.
Amaxabiso akhuselekileyo kwindawo yokudodobala kwezoqoqosho
Elona thuba lelona lihle lokuhlalutya ukuba zeziphi izinto ezikhuselekileyo okanye iiasethi zemali ezinokuthi zibe yindawo yokubalekela kwiinyanga okanye kwiminyaka ezayo
Iinjongo ezinokuthi ziqwalaselwe kwi-2020
Enye yeenjongo zomsebenzi olandelayo kukuhlola imarike de kube ngoku ulibele kwizicwangciso zakho zotyalo-mali.
Amaxabiso awile ngaphezulu kwama-50%
Akukho nto imbi kwiimarike zezabelo kunokuba zibekwe kwizitokhwe ezilahlekileyo phantse kuwo onke amaxabiso emarike yazo.
2020: unyaka wokuhlaziywa?
Luhlaza, amandla ahlaziyekayo emke ekubeni yinto ephezulu ukuya kwesinye sezona zindululo zinengeniso kwiimarike zezabelo.
Ngaba kuyasebenza ukuthenga ezona stock zisebenza kakubi ekuqaleni konyaka?
Ukuthenga ekuqaleni konyaka ezokhuseleko ezenze okona kubi kunyaka ophelileyo kunokuba sisicwangciso sotyalo-mali kwi2020.
Ngaba kufanelekile ukuqesha imali yotyalo-mali lwangaphandle?
Mhlawumbi abatyali mali abaninzi abazi ukuba iimali zotyalo-mali zinokuzibeka ngokusesikweni kwezinye iimali ngaphandle kwe-euro, njengedola.
Iiakhawunti zorhwebo ezingekho mthethweni
Ukuze usebenzise ezi akhawunti zorhwebo zixhaswa ngemali, umsebenzisi kufuneka athathe ikhosi apho, phakathi kwezinye izifundo, imigaqo icacisiwe.
Tyala imali kwimarike yemasheya yaseGreat Britain, kutheni?
Imarike yemasheya eGreat Britain igcina izinto ezithile ezifanele ukuqatshelwa xa uza kwenza imisebenzi yezi mpawu.
Umzuzu ombi kwimithombo yeendaba ezimanyelwayo kwimarike yemasheya
Ukuba kukho icandelo kwicandelo lezabelo zamashishini elinganayo elingahambelani nelona xesha lilungileyo, ayikho enye ngaphandle kwaleyo imelwe yimithombo yeendaba emanyelwayo.
Abatyali mali abalibalekileyo baseSpain
Umthamo weekhontrakthi yinto emisela ngendlela ethile amaxabiso alityelweyo kwii-equities zaseSpain
IMapfre ibhengeza 'isilumkiso senzuzo' kwaye izabelo zayo ziwela kwimarike yemasheya
IMapfre iqukumbele usuku lwalo Mvulo ngokuwa kufutshane ne-4%, emva kokubhengeza ukuba kuyakufuneka iphonononge iinjongo zezemali.
Amaqhinga okwenza imisebenzi enenzuzo kwimarike yemasheya ekupheleni konyaka
Oku kuya kuba yimisebenzi ekhawulezayo ngeenjongo zokwenza imisebenzi ibe nengeniso kwisithuba esifutshane kakhulu sexesha.
Uzahlula njani ipotifoliyo yengxowa mali?
Esinye sezitshixo zokungaphazami kolu hlobo lotyalo-mali kukwenza ukungafani ekusebenzeni.
Izitokhwe ezi-5 kwimarike yestokhwe yaseSpain ezingakhange zisokole ngenxa yokuwa
I-Endesa ibonise iziphumo ezincumisayo phakathi kukaJanuwari noJuni 2019, enkosi kulawulo olufanelekileyo lwentengiso ekhululekileyo.
Utshintsho kwizabelo ezihanjiswe ngu-Endesa
I-Endesa iyakusika 'ukuhlawula kwayo' ukuya kuma-70% ukuxhasa iprofayili yokukhula kwayo kwaye izinikele ekukhuthazeni izinto ezinokuphinda zisebenze, zinikezele nge-100% ukuza kuthi ga ngoku.
Ngawaphi amacandelo aphambili kwimarike yemasheya yaseSpain
Ngexesha lokwenza utyalomali enye yezinto ekufuneka ujonge kuwo ngamacandelo oza kuya kuwo wonke ulondolozo lwakho.
Ukutyala imali ngoDisemba ngaphandle kokubakho kwintengiso yemasheya
UDisemba yinyanga ekhulayo kwiimarike ze-equity, kodwa ukuba nangasiphi na isizathu awufuni kuziveza kwezi marike zezimali.
Phinda ufumane izabelo
Izicwangciso zokubuyiselwa kwemali zahlula-hlula zivumela ukuthengwa okuzenzekelayo kwezabelo ezitsha, ngokwenyusa ibhalansi yezabelo.
Iingcebiso ezi-6 zokujolisa kutyalo-mali kwi2020
Kulo nyaka sele uza kuqala, akuyi kuba lula ukuhambisa utyalomali ngokuchanekileyo, kodwa ngokuchaseneyo, kugcwele imiqobo.
USniace uzama ukubuyela kwimeko yesiqhelo: ngaba uza kuphumelela?
Kwicandelo lobuchwephesha le-Sniace ukuba liphuculwe, olunye lwale miqondiso lusekiwe kuba lukwazile ukoyisa ukuphakama kokugqibela okuphezulu.
Olunye uhlobo kwintengiso yesitokhwe: ezinye iimodeli zotyalo-mali
Kukho ezinye iimodeli zotyalo-mali ngexesha apho imarike yemasheya ingasenenzuzo kwimali yethu xa kukho utshintsho kwimo.
Ukwenza imisebenzi yeATM ikhuseleke kakhulu, iibhanki ziyile amakhadi etyala akhuselekileyo
Amaxabiso ama-5 azolile ngo-2020
Kukho uthotho lokhuselo esinokuthi sisebenzise kulo ngokukhululekileyo kulo nyaka kuba ukungazinzi yenye yezona ziphantsi kwimarike yesizwe eqhubekayo.
NgeyoMnga inyanga enyusiweyo ngokugqwesa kwintengiso yesitokhwe yaseSpain
Phakathi kwemijikelo ephezulu edla ngokuziphinda, uDisemba yeyona nyanga intle yokuthatha izikhundla kwizabelo zaseSpain.
Amarhe okuthengisa i-Endesa kubatyali mali baseTshayina
I-rumor ibonakale kwimixholo yeendaba zedijithali: "I-ENEL ifuna ukulahla i-Endesa", igcwalisa abatyali mali ngamathandabuzo.
I-Oryzon inokuba sisigqubuthelo sebhegi yaseSpain
I-Oryzon inokuba yenye yeenkampani ezinemimangaliso elungileyo kunyaka olandelayo kwimarike yezabelo yaseSpain.
Ngaba imarike yemasheya yase-US ingaqhubeka iye kwiindawo eziphakamileyo?
Abekho abahlalutyi abambalwa abanethemba lokuba imarike yemasheya yaseMelika inyukile okanye isondele kakhulu kule meko kwaye siza kuyazi kungekudala.
Zinjani iidipozithi onokuthi uzenze isivumelwano?
Enye yeemveliso zokonga ngokugqwesa ziidipozithi zexesha elide, kodwa okwangoku inzuzo yabo ephantsi ichasene nabo.
Ungenza ntoni kwimeko yokuhla simahla?
Inzala yasimahla lelona nani lakha lakha lenziwa kumaxabiso, phakathi kwezinye izizathu kuba ayisenazo inkxaso ezingaphantsi.
Ngawaphi amaxabiso akhokelela kunyuka okanye ilahleko kwimarike yemasheya?
Njengoko kunokuhlaziywa, akusoloko kukho amaxabiso afanayo akhokelela ekunyukeni, okanye kwimeko yabo abo baphulukana kakhulu kwiimarike zezemali.
Iithagethi kumaxabiso ezabelo kwi-Ibex
Nangona amathemba e-Ibex engakhange abonakalise ukugqwesa, banomdla wokuhlaziya.
Izenzo ezili-9 zokuthintela kwimarike yemasheya
Izicwangciso eziphambili kwimarike yemasheya ziphuhlisiwe ukunqanda iintshukumo ezingafunekiyo kwimisebenzi eqhutywa kwezi marike zezemali.
Amanyathelo amakathathwe xa utyala imali
Siza kuphakamisa abatyali zimali ukuba bangathatha uthotho lwamanyathelo okhuseleko ukusukela ngoku ukuthintela isimanga kwintengiso yesitokhwe.
Iifrifols, elinye ixabiso elingena kumfanekiso wokunyuka kwamahhala
Ngelixa imeko yezobuchwephesha yeGrifols yayiqaqambile, injalo ngakumbi ukusukela kule veki xa ingena kwinani lokunyuka simahla.
Athini amaxabiso amaxabiso?
Ixabiso lotyalo-mali, okanye utyalo-mali kwixabiso, yindlela yotyalo-mali ethi ivelise imbuyekezo entle kwixesha elide.
Ukuthatha ngobubele ukutshintshiselana kwesitokhwe eSwitzerland ukuya kwi-BME
Ixabiso elithe lasungulwa lokuNikezelwa koLuntu lokuFumana (i-OPA) kwizabelo kwi-BME sele ikwi-34 yeeros ngesabelo ngasinye.
Ezinye zeemali zotyalo mali
I-Banco Santander ikwavelele njengenkokheli eSpain kwingxowa-mali yoxanduva kwezentlalo (SRI), nangaphezulu kwama-66% ezabelo.
Amaxabiso amathandathu ukuqala i-2020
Akukho nto ingcono kunokucebisa ukuba ngawaphi amaxabiso kwimarike yaseSpain enokwenza ngcono kunenye ukusukela kwinyanga kaJanuwari
I-Naturhouse idlula ii-euro ezingama-2
Okwangoku, enye yezona ndawo zishushu kwimarike yaseSpain eqhubekayo ngokuqinisekileyo yinkampani yemveliso yokutya yeNaturhouse.
Kutheni IAG iindaba kangaka?
IAG lukhuseleko olunxibelelene ngokusondeleyo kwindaleko kwixabiso leoyile ekrwada kwaye le nto ibangela ukuba ukungazinzi kwayo kubengaphezulu.
Luveliswa njani uhlaziyo lwamacandelo e-Ibex 35?
Njengonyaka ngamnye, izinto ze-Ibex ziya kuhlaziywa, njengeSacyr ngoku. Apho kungena kunye nokuphuma kwamaxabiso amatsha kuyakwenzeka
Imingcipheko emi-6 enokulimaza imarike yemasheya kwi-2020
Omnye wemingcipheko enokohlwaya kakhulu kwiimarike zezabelo kukunyuka okunokubakho kwinqanaba lenzala kwindawo ye-euro.
I-Bankia kwezona ndlela zayo zinkulu
Okwangoku izabelo ze-Bankia zithengisa malunga ne-1,73 ye-euro, elinye lawona manqanaba asezantsi kule minyaka idlulileyo.
Izicwangciso zepenshini ezisekwe kwi-ETF's
I-Bankinter ibhengeze ukumiliselwa kwesithembiso esitsha sezicwangciso zomhlala-phantsi ngokusekwe kwiimali ezidwelisiweyo (i-Exchange Traded Funds okanye i-ETF's, kuba iBhanki yayo ibhengeze ukumiliselwa kwesithembiso esitsha sezicwangciso zomhlala-phantsi ngokusekwe kwiingxowa-mali ezidwelisiweyo. Igama ngesiNgesi) ngePopcoin, umphathi wakho wotyalo-mali lwedijithali
Ngaba iimarike zamasheya zikwenza kucace ukudodobala kwezoqoqosho?
Ngapha koko, sele zikhona iingxelo zoqoqosho ezithetha ngomhla wokuphelelwa lixesha kwezoqoqosho kwaye ngowama-2021.
Ungayifumana njani imbuyekezo eyi-3% kutyalo-mali lwakho?
Ewe ukubuya okungaguqukiyo okujikeleze iipesenti ezi-3 kuye kwaba yingxaki kubatyali mali abancinci nabaphakathi.
Amafu ama-5 amnyama ajinga kwimarike yaseSpain
Ngaphandle kwento yokuba imarike yestokhwe saseSpain isengaphezulu kwenkxaso ebalulekileyo enamanqaku e-9.000, kukho ubuthathaka kwixabiso layo.
Abaxhamli kunye nabaphulukene noorhulumente wamaphiko asekhohlo eSpain
Akukho mntu kwimarike yezabelo ethandabuzayo ukuba amanye amacandelo aya kuxhamla ngaphezulu kunamanye kwimeko yesivumelwano kurhulumente wephiko lasekhohlo.
Usebenza njani kwimarike yestokhwe yaseSpain kwiintsuku zokugqibela zonyaka?
Enye into ekufuneka isebenze kwinxalenye yokugqibela yonyaka kukuba ifuna unyango olwahluke kakhulu xa kuthelekiswa nezinye iinyanga.
Izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga ngokuba lulwelo kwimarike yemasheya
Ubutyala buthetha ukuba awukho kulo naluphi na udidi lotyalo-mali, zombini kwiimarike zengeniso esisigxina nakumahluko.
Ukhuseleko oluthengisa kufutshane ne-100 euro
Kukho iqela elikhethiweyo kwimarike yemasheya enziwe ngokhuseleko olurhweba ngeenxa zonke okanye kufutshane kakhulu ne-100 yeuros ngesabelo ngasinye.
Amaxabiso amathandathu aya kuzola kunye nokuwa kwemarike yesitokhwe
I-Red Eléctrica yenye yeeklasikhi kweli qela kuba yenye yezindululo kwintengiso yesitokhwe ezisebenza njengendawo ekhuselekileyo.
UDuro Felguera, ichicharro kunye neminqweno
I-Duro Felguera lukhuseleko olunokungaziphathi kakuhle, kuba okufanayo kungaphakama nge-6% ngolunye usuku kukushiya ngepesenti enye ngosuku olulandelayo.
I-Telefónica ngomzuzu wenyaniso
I-Telefónica inyusa ukukhula kwengeniso (+ 1,7% exeliweyo) xa kuthelekiswa nekota yesithathu ye-2018, ngenxa yokuphuculwa kweSpain, iBrazil neJamani.
Izinto ezi-6 eziya kuchaphazela imarike yaseSpain
Enye yezinto eziya kuthi zimisele ukuvela kwemarike yaseSpain kukuba urhulumente ozinzileyo unokwenziwa kwiintsuku ezizayo.
Idatha ekufuneka abatyali mali bayilungiselele kukhuseleko
Kukho olunye uthotho lweedatha ezithile ngakumbi ezifuna inkcubeko enkulu yezemali kwinxalenye yabasebenzisi bemarike yemasheya.
Iziphumo zikaSantander zenza ixabiso lazo kwimarike yentengiso
Ukubhengezwa kweziphumo zeshishini kwikota yesibini yalo nyaka akuzange kuhlale kakuhle kuqikelelo lwamaxabiso ezabelo zeBanco Santander.
I-repsol, i-Exxon kunye ne-BP: amathuba amatsha okuthenga?
I-Repsol iqalile ukuvelisa ioyile eBuckskin, intsimi ebekwe emanzini anzulu e-US Gulf of Mexico.
Kukuthini ukwanda kwemali enkulu?
Kukho ukwanda kwemali eyinkunzi kwezinye zokhuseleko ngokuxhomekeke kwezi ntshukumo kwikomkhulu lazo kwaye ezinokuzisa izibonelelo.
I-Endesa isiya kwii-euro ezingama-27
I-Endesa ixabisile nakweli hlotyana linzima, ngokunyuka kwe-4%, ngelixa isalathiso esikhethiweyo sentengiso yesizwe yehla yaya kwi-6%.
ISpanish, uMntla Merika okanye iMarike yaseYurophu?
Imarike yemasheya yaseSpain yeyona ntengiso sinayo kakhulu ezandleni zethu kwaye siqhelene kakhulu neenkampani ezidweliswe kwintengiso yesizwe eqhubekayo.
Iindlela zokwenza ukonga zenze inzuzo ngo-2020
Esinye sezitshixo sokwenza ulondolozo lwakho lube nenzuzo kulele ngokwahlukana kokonga kwakho ngononophelo olulodwa kunyaka onobungozi njengalo.
Ilifa uMario Draghi asishiyela lona
Kwanele ukukhumbula ukuba xa uMario Draghi ethatha amanyathelo abukhali kwaye icebo lokuvuselela esele liphelelwe lixesha, uqoqosho lwe-Eurozone.
Iimali zotyalo-mali kwiinkampani zetekhnoloji
Enye yezona zinto zixhaphakileyo zemali yotyalo-mali kwiinkampani zetekhnoloji kukuba ngokubanzi baneekhomishini ezibanzi.
Ndixelele ukuba yeyiphi iprofayili yotyalomali kwaye ndiza kukuxelela ukuba yeyiphi imveliso onokuyiqesha
Iprofayili nganye yotyalo-mali inonyango olwahlukileyo lokuhambisa utyalo-mali kunye nokwenza ulondolozo lube nenzuzo kwelona xesha liphezulu longenelelo.
Imarike yemasheya yaseMelika izakuphelisa unyaka phantse kwindawo eziphakamileyo
Izabelo eUnited States ziqhuba kakuhle kulo nyaka ezakuphela.
Kutheni le nto intengiso yamasheya inyuka xa ujongene nengxaki yezoqoqosho?
Enye yezinto etsala umdla wabatyali zimali kukuba imarike yemasheya inyuka ngenxa yengxaki yezoqoqosho.
Ukongezwa okutsha kwimarike yemasheya yaseSpain: enye indlela yotyalo-mali
I-Madrid Stock Exchange yenye yezona zinto zisebenza ngokubhekisele kwizongezo ezitsha eziza kudweliswa kwiimarike zezabelo
I-Red Eléctrica kwiradar yokuthenga kwangaphambili
Esinye sezikhuthazo zokuvula izikhundla eRed Eléctrica kungenxa yokuba yenye yeenkampani zeIbex 35 ezinengeniso ephezulu.
Ngaba lixesha lokungena kwizikhundla ze-Enagás?
I-Enagás yenye yeemali zaseSpain ezixabise ezona nyanga zilishumi elinambini zidlulileyo.
Abacebisi beRobo: yintoni?
Sikuxelela konke malunga nabacebisi beRobo, yintoni kwaye ziziphi izibonelelo zayo njengotyalo-mali lwexesha elizayo? Fumanisa izibonelelo zayo kunye nendlela yokuzisebenzisa.
I-Ibex 35 ishiyeke ngasemva ngaphakathi kwezalathiso zaseYurophu
Isalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35, ngomnye wabadlali abaphambili kulo nyaka, oza kuphela.
Ixesha elizayo lesitokhwe
Ixesha elizayo kwiimarike zezemali zenziwe kwisivumelwano esinyanzela abo banesivumelwano ukuba bathenge okanye bathengise.
Ixabiso lecandelo lombane laseSpain
Icandelo lezombane liphawuleka kuba onke amalungu alo achongwe kakuhle kwaye adityanisiwe ngaphakathi kwe-Ibex 35.
Amacandelo oqobo okutyala kuwo: irayisi, iwayini okanye ioyile
Kukho amacandelo okuqala okutyala, afana nerayisi, iwayini okanye iioyile, ezizinto onokukhetha kuzo kwiimarike zezabelo.
Kutheni le nto u-Abengoa edweliswe kwi-0,22 ye-euro ngesabelo ngasinye?
Ukusuka ekubeni sesinye sezithsaba zesithsaba ukuya ekuxabiseni ngokunganyanzelekanga kwintengiso yemasheya, olu luphononongo luka-Abengoa lweemarike zezabelo kwiminyaka yamuva
Uyilungiselela njani ipotifoliyo yengxowa mali yotyalo mali ye2020?
Ii-asethi ze-equity azinakusilela ekulungiseleleni iiphothifoliyo zotyalo-mali, kodwa ukukhetha ngokukhetha kwabo.
Ngaba kuya kubakho iRally yeKrisimesi ekudala ilindelwe kulo nyaka?
Umhlangano weKrisimesi uhlala usetyenziswa ngabatyali mali abancinci nabaphakathi ukwenza iziphumo zabo zonyaka.
Ukuvezwa okukhulu kwemali yotyalo mali
Iimali zamashishini zamazwe ngamazwe zatshintsha imeko yeenyanga zamva nje kumdla wabatyali mali ukuze balondoloze imali yabo.
Amaqhinga amancinci okuphucula intengiso yeemarike zentengiso
Enye yeenjongo zakhe nawuphi na umtyali mali omncinci nophakathi kukuhlengahlengisa ngcono amaxabiso orhwebo kwimarike yemasheya.
Ezinye iindlela ezinokufakwa engxoweni yeeprofayili ezikhuselayo
Esinye sezona zindululo zibalaseleyo kubatyali mali abazikhuselayo kunokuba yimali edibanisa ii-equity kunye nezinye iiasethi zemali.
Ungayithengisa njani intshukumo ye-bearish kwimarike yemasheya?
Esinye sezitshixo kwimpumelelo yemisebenzi eqhutywa ziintshukumo ze-bearish kukuba zijolise kwelona xesha lifutshane lisisigxina.
Ngaba iMfono engaphezulu inokuba yenye indlela eya kwiTelefonica?
Omnye wemibuzo ebuzwa yinxalenye elungileyo yabatyali mali yile yokuba kungcono ukutyala imali eMas Móvil okanye eTelefonica.
Ejamelene nemeko yokudodobala kwezoqoqosho kumazwe ngamazwe, kuyinyani ukuba kuyamangalisa ukuba iimarike zezabelo azikhange ziluthathe olo hlobo.
Ungenelwa njani kurhwebo lwe-Intanethi kwimarike yemasheya?
Abatyalomali abakhetha ukwenza imisebenzi yabo kwifomathi ekwi-Intanethi, oko kukuthi kwi-Intanethi, banokuxhamla kwizibonelelo eziveliswayo.Abatyalomali abakhetha ukwenza imisebenzi yabo kwifomathi ekwi-Intanethi, oko kukuthi kwi-Intanethi, banako uzuze kwizibonelelo eziveliswa leli jelo libalulekileyo lentengiso